Pogba oo noqday Ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida, kadib markii ay iibsatay Man United - Hablaha Media Network
Pogba oo noqday Ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida, kadib markii ay iibsatay Man United
HMN:- Kadib wada xaajood socday todobaadyo ayaa Kooxaha Manchester United iyo Juventus heshiis ku gaareen ciyaaryahanka sida weyn u qabsaday suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Paul Pogba, iyadoo xidigan reer France lagu qaatay adduun lacageed oo gaaraya 100 million oo Pound ah.
Pogba ayaa dib ugu laaban doona afar sano kadib kooxdiisa hore ee Manchester United oo sanadkii 2012 si xor ah ugu wareegay Juventus.
Tababaraha cusub ee Man United Jose Mourinho oo si aad ah u doonayay xidigan qadka dhexe ayaa ugu dambeyn la soo wareegay, waxaana lagu wadaa in kooxda Man United ay 48-saac ee soo socota si rasmi ah lagu dhawaaqo heshiiska.
Ciyaaryahan Pogba ayaa xiran doona Maaliyada No 6 ee Kooxda Manchester United, sida horay loo shaaciyay, waxaa uu u saxiixi doona kooxda shan sano, isagoo todobaadkiiba qaadan doona 290,ooo Pound.
Paul Pogba ayaa la sheegay inuu safan doono kulanka todobaadka soo socda ee Manchester United la ciyaari doonto kooxda Leicester City Koobka loo yaqaano Community Shield.
Waxaa uu tijaabada caafimaad ku mari doonaa magaalada Los Angels ee dalka Mareykanka oo uu maalmahan dalxiis iyo nasasho u joogay.
Pogba ayaa noqonaya ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida, kadib Gareth Bale oo kooxda Real Madrid sanadkii 2013 kula wareegtay lacag gaareysa 86 million oo Pound ah.